တရုတ်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပလည်ပတ်မှု homogenizer emulsifier mixerIcosmetic mixer ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူများ |ZhiTong
အတွင်းနှင့်ပြင်ပလည်ပတ်မှု homogenizer emulsifier mixerIcosmetic mixer
၁။အလှကုန် ရောမွှေစက်လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုကောင်းသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ ဧရိယာသေးငယ်သည်၊ နှင့်အလိုအလျောက်စနစ်မြင့်မားသည်။
2. အတွင်းနှင့်ပြင်ပစောင်ရေတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၏အလှကုန် ရောမွှေစက်အတူ ပိုမိုမြင့်မားသော homogenization ထိရောက်မှု။
3. အလှကုန် ရောမွှေစက်အမျိုးသားလက်တွေ့နှင့် အသွင်အပြင် မူပိုင်ခွင့်၊ အမျိုးသားအဆင့် နည်းပညာမြင့်ထုတ်ကုန်များ ရရှိခဲ့သည်။
4.အဖုံးအလှကုန် ရောမွှေစက်ဟိုက်ဒရောလစ်/လျှပ်စစ် lifting အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှတ်သည့်နည်းလမ်းမှာ emulsification pot body သည် စောင်းနေသည် သို့မဟုတ် အောက်ခြေကို ဖိထားပြီး ပစ္စည်းအား ပန့်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။မတူညီသောထုတ်ကုန်များအလိုက် အကောင်းဆုံးကုသမှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
5. Homogenizer Emulsifier Mixerဘွိုင်လာကို လွတ်လပ်စွာ ရုတ်သိမ်းနိုင်ပြီး နှိမ့်ချနိုင်ပြီး ဘွိုင်လာတိမ်းစောင်းမှုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ဆီဖိအားရုတ်သိမ်းစနစ်ဖြင့် ရောစပ်ထားသော မြန်နှုန်းလေဟာနယ် emulsifying ကိရိယာ။
6.ဂျာကင်အင်္ကျီ၏အပူစီးကူးမှုအလယ်အလတ်Homogenizer Emulsifier Mixerပစ္စည်း၏အပူကိုသိရှိရန် လျှပ်စစ်အပူပေးပိုက်ဖြင့် အပူပေးသည်။
7.အပူအပူချိန်ကို မထင်သလို သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ရေနွေးငွေ့ဖြင့်လည်း အပူပေးနိုင်သည်။
8.တံဆိပ်တော်Homogenizer Emulsifier Mixerအထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော နှစ်ထပ်အစွန်းမျက်နှာစက်မှုတံဆိပ်နှင့် အရိုးစုဆီတံဆိပ်၏နောက်ထပ်တံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်သည် အအေးခံထားသောရေကို လည်ပတ်အအေးခံပေးပါသည်။
9.အပေါ်တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာ၏Homogenizer Emulsifier Mixerတစ်ခုတည်းသောစက်မှုတံဆိပ်ကိုလက်ခံသည် (တံဆိပ်ခတ်ထားသောအရည်သည် glycerin ကိုလက်ခံသည်) ။
၁၀။အရည်ပျော်သည့်အိုးကို ဆီနှင့်ရေအတွက် အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပြီး အင်္ကျီအပူပေးသည့် ရေနွေးငွေ့အဆို့ရှင်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သည်။လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းသည် အပူပေးခလုတ်ကို ဖွင့်ပေးသည်။ဒေါင်လိုက် မြင့်မားသော ရှတ်ညီညီညွှတ်သော emulsifier သို့မဟုတ် သာမာန် ရောစပ်သည့် ကိရိယာသည် အညီအမျှ အပူပေးသည်။
၁၁။အအေးခံရေသည် ပစ္စည်းကို အေးစေရန် အင်္ကျီနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
၁၅။ Homogenizer Emulsifier Mixerအထပ်ထပ်အပြင်ဘက်တွင် လျှပ်ကာအလွှာဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက် အဆင်ပြေပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။
၁၆။တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိရိယာ၏တံဆိပ်သည် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော နှစ်ထပ်အစွန်းမျက်နှာစက်မှုတံဆိပ်နှင့် အရိုးစုဆီတံဆိပ်၏နောက်ထပ်တံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိပြီး စက်မှုတံဆိပ်သည် အအေးပေးသည့်ရေကို လည်ပတ်အအေးခံစေသည်။
၁၇။မော်တာ၏အမြန်နှုန်းHomogenizer Emulsifier Mixerတည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်းနှင့် အားကောင်းသော torque ပြည့်မီရန် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာမှတစ်ဆင့် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဝန်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
2.ပမာဏ : 100L မှ 3000L အထိ
ယခင်- လျှပ်စစ်အပူပေးဖုန်စုပ်စက် emulsifying ကိရိယာများ|အလှကုန်ပြုလုပ်သည့်ကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: ပုံသေအမျိုးအစား ဖုန်စုပ် homogenizer အလှကုန်ရောနှောစက် |စက်မှု Cosmetic Mixer